Semalt Explained Sida loo sameeyo Inta badan SEO iyo Email Marketing Integration
Suuq-geynta Emailka waa kanal qiime-ku-ool ah oo loogu talagalay fidinta wacyigelinta caanka,iyo in la dhiso xiriir wanaagsan oo lala yeesho macaamiisha iyada oo la abuurayo waxyaalo ku qasab, faa'iido leh, ama madadaalo leh. Markaad ka fakartidin SEO ah oo kaliya ay ku xiran tahay bogga isbarbar dhiga bogga natiijooyinka, waxay u muuqataa inay tahay mid aad u adag oo kala duwan.
Artem Abgarian, Maamulaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Dijital ah waxay sharaxayaan xiriirka ka dhexeeya suuq-geynta emailka iyo SEO waxayna wadaagaan talada ku saabsan sida loola shaqeeyo si waxtar leh.
Kobcinta Suuqgeynta Emailka
Adeeg bixiyeyaasha emailka waxay bixiyaan cinwaanada IP iyo kormeerid dhaqdhaqaaqa.Iyadoo la tixraacayo sharciga QM-SPAM wuxuu kordhiyaa kalsoonida goobta oo leh ISPs. Natiijada aan u hoggaansamineynin heerarka hoos-u-qaadista, ama liiska madow.Akhristayaasha qaar waxay doortaan inay akhriyaan fariimahooda qaab qoraal ah, sidaa daraadeed waa feejignaan si ay u haysato qoraal qoraal ah oo loogu talagalay emailka HTML. Si tartiib ah ugala socdofarriimaha gudbinta marka la barbardhigo bilawga ah iyaga ayaa yaraynaya fursadaha "joojinta."
Macluumaadku waa inuu leeyahay xiriir toos ah bogga soo degaya, kaas oo lehmacluumaadka ku saabsan badeecada, adeegyada, iyo dallacsiinta, waxayna ku shaqeeyaan ereyada muhiimka ah ee loogu talagalay. Shakhsiyadeeynta mawduucyada ku jira mawduucyo gaar ahDulsaarka ayaa kordhiya fursadda daawashada iyo ka qaybgalka. Markaad la macaamilayso dhagaystayaasha ugu muhiimsan ee la beegsanayo, qaybinta adoo adeegsanaya naafanimada,xiisaha ama doorbididdu waxay muhiim u tahay maadaama ay yareyneyso heerarka qulqulka. SEO wuxuu xawilaa gaadiidka goobaha leh sanduuqyo calaamadeysan oo sidaas u caawiyaliisaska liiska. Ugu dambeyntii, oo ay ku jiraan xiriirada warbaahinta bulshada ee macaamilku waxay ku lug leeyihiin martida iyo dadka qaata wixii dhiirrigelin ah..
Isdhexgelinta Suuqgeynta SEO iyo Emailka
Siyaabo fudud oo lagu hagaajin karo naqshadeynta template waxaa ka mid ah:
Dhaqannada Wanaagsan ee SEO sida badelida cinwaannada,khadadka mawduuca, nuqulka jirka, iyo qoraalada ku xiran bogagga gaarka ah ee bogga. Sawiradu waa inaysan ka badnayn 600 pixels inta badanAkhristayaasha kaliya kaliya qoraalka hore ee sawirada leh ayaa sawiray. Astaamaha qoraalka hoose ee sawirrada waxay u suurtageliyaan dadka isticmaala text-only inay fahmaan mawduuca."Fiiri mashiinka Browser" waa inuu ka muuqdo naqshadda qaab-dhismeedka haddii ay dhacdo in akhristayaashu ay dhibaato kala kulmaan akhrinta emailka
Cinwaanada Canonical ayaa khuseeysa marka uu rabo inuu isticmaalo dukumintiyadablogs ama wargeysyada si aad u hesho bogga internetka ee makiinadaha raadinta raadsanaya. Waxay u sheegaan matoorka raadinta si uu ula daaweeyo bogga sida URL-ka la door biday,iyo in wax kasta oo maadada ah ay dib ugu soo laaban doonaan.
E-Newsletter Archive waa maktabadda dhammaan wargeysyada la daabacayiyada oo dhammaan mawduucyada la xiriira. Dhammaan xarfaha ayaa lagu fududeeyaa qoraalka lagu magacaabo adigoo isticmaalaya erayada muhiimka ah iyo Xiriirinta Shaqsi ee warside kasta
Suuq-geynta Macaamilka wuxuu u baahan yahay sheybaaro si ay ufilaan muraayadaha gacantaoo leh naqshad wax ku ool ah oo lagu hagaajinayo gawaarida moobilka gaar ahaaneed
Mawduucyada Mowduucyada waxay caawiyaan akhristayaasha fahmayaan fariin email ka horxitaa furitaanka. Waa inay yar yahiin inay sameeyaan SEO oo ay ku lug yeeshaan danta qofka qaata
VIDEO Calaamadaha. Fiidiyowyada shaqsiga ah sida Wicitaan si aad wax uga qabato akhristayaashaWaxbadan oo wax badan ka barto kana caawiya beddelidda
Dabagalka raadraaca ee isticmaalaya Google Analytics
Emayladu ma yareeyaan nuxurka illaa inta ay u hoggaansamaan CAN-SPAMshuruudaha iyo u fududee oo gaaban. Maskaxda ku hay in ay naqshadeeyaan sida ay ula socdaan dhageystayaasha bartilmaameedka leh SEO. Iyada oo laHorumarinta mustaqbalka ee Google, email-ka ayaa muhiim u ah ganacsiyada maaddaama dadka isticmaala aysan u baahnayn inay booqdaan website-ka si ay u helaanhawlaha ay qabteen Source .